काठमाडौँ – लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले मलेसियामा जारी आईसीसी विश्वकप टी–२० एसिया क्षेत्र छनोटको खेलमा आफ्नो नाममा नयाँ कीर्तिमान बनाएका छन् ।
सिंगापुरबीरुद्ध सुरुवाती २ विकेट लिदैँ नयाँ रेकर्ड कायम गरेका हुन् । यो दुई विकेटसँगै एकै प्रतियोगितामा राष्ट्रिय टोलीबाट सवार्धिक विकेट लिने बलर बनेका छन् । जारी प्रतियोगितामा सन्दीपले २२ विकेट लिई सकेका छन् । सन्दीपले सिंगापुरका मनप्रीत सिंहलाई १० रनमा आउट गर्दै यो सफलता हात पारेका हुन् ।
यसअघि राष्ट्रिय टिमबाट एकै प्रतियोगितामा धेरै विकेट लिने रेकर्ड बसन्त रेग्मी र बिनोद दासको नाममा रहेको छ । रेग्मीले सन् २०१२ को डिभिजन–४ प्रतियोगितामा तथा बिनोद दासले सन् २००५ को एसीसी फास्ट ट्रयाक कन्ट्रीज तीन दिवसीय प्रतियोगितामा समान २१ विकेट लिएका थिए । उक्त रेकर्ड तोड्दै सन्दीपले नयाँ कीर्तिमान राखेका हुन् ।
एकै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालको लागि सर्वाधिक विकेट लिने रेकर्ड सन्दिपकै नाममा रहेको छ। उनले गत बर्ष जुलाईमा यु–१९ बिश्वकप छनोट प्रतियोगितामा ६ खेलमा कुल २४ विकेट लिंदै कीर्तिमान बनाएका थिए ।
प्रकाशित : शुक्रबार, असोज २६, २०७५१३:४१
यू–१९ एसिया कप : नेपालको खराव प्रर्दशन जारी ! यस्तो छ अहिलेको स्थिति !
विश्वकपको ६३ खेल यस्तो रह्यो, विजेताको टुंगो आज लाग्ने ! हेर्नुहोस् अहिले सम्मको सम्पूर्ण विवरण !
१५० रनको लक्ष्य पाएको स्कटल्याण्डले जवाफी ब्याटिंग गर्दै: यस्तो छ ताजा स्कोर
भैरहवामाथि ललितपुरको शानदार जित